ကဲရကယ်တောကြောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ကဲရကယ်ကြောင်ရိုင်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မျိုးစိတ် C. caracal
ကဲရကယ်တောကြောင်၏ သိပ္ပံအမည်မှာ ကဲရကယ် ကဲရကယ် ဖြစ်သည်။ အာဖရိကတိုက်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာရှအလယ်ပိုင်းနှင့် အိန္ဒိယတို့တွင် တွေ့ရ သော ကြောင်ရိုင်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ထည်အရွယ်အစား အလယ်အလတ် ရှိသည်။ ကိုယ်ထည်တုတ်ခိုင်သည်။ ခြေတံရှည်သည်။ မျက်နှာတိုသည်။ နားရွက်အမွေးစုများ ရှည်သည်။ စွယ်သွားရှည်သည်။ သားမွေးမှာ အနီရောင် သမ်းသော အဝါရောင် (သို့မဟုတ်) သဲရောင် တပြင်တည်း ဖြစ်သည်။ ခါးနားတဝိုက်တွင် အရောင်ဖျော့ပြီး အနီရောင်သမ်းသော အမှတ်အသားများ ရှိသည်။ ပခုံးအမြင့် ၄၀ မှ ၅၀ စင်တီမီတာ (၁၆ မှ ၂၀ လက်မ) ရှိသည်။ ကိုယ်အလေးချိန် ၈ မှ ၁၈ ကီလိုဂရမ် (၁၈ မှ ၄၀ ပေါင်) လေးသည်။ ညအချိန်တွင် ကျက် စားသည်။
ကဲရကယ်ကြောင်ရိုင်းသည် အိမ်ကြောင်ထက် အတန်ငယ်ကြီးမားသည်။ အသွေးအရောင်မှာ အောက်ပိုင်းတွင် အဖြူရောင်ရှိပြီး အပေါ်ပိုင်းမှာ နီညိုရောင် ဖြစ်သည်။ နားရွက်များမှာ အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီး နားရွက်ဖျားရှိ အမွေး များမှာ ပန်းပွားသဖွယ်ရှည်ပြီး ဖျာလျက်နေပေသည်။ အမြီးမှာ ရှည်သည်။ မျက်စိများပေါ်တွင် အဖြူပြောက်နှစ် စက်စီ ရှိသည်။ ယင်းကြောင်ရိုင်းများသည် ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်း နှင့် မြက်တောများတွင် နေလေ့ရှိပြီး အသားစားသတ္တဝါမျိုး ဖြစ် သည်။ ကဲရကယ်ကြောင်ရိုင်းကို အိမ်တွင် မွေးထားပါကလည်း အလွယ်တကူ ယဉ်ပါးလာတတ်ပေသည်။ 
အာဖရိကတိုက်တွင် ကဲရကယ်တောကြောင်ကို ဆဟာရ သဲကန္တာရ၏ တောင် ဘက်ဒေသများတွင် တွေ့ရသည်။ သို့သော်လည်း အာဖရိကတိုက်မြောက်ပိုင်း တွင်မူ ရှားပါးသည်။ အာရှတိုက်တွင်မူ ယင်းတို့ကို အာရေဗျကျွန်းဆွယ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှသည် အိန္ဒိယ အနောက်ပိုင်းအထိ တွေ့ရသည်။
↑ Sunquist, F.; Sunquist, M. (2002). "Caracal Caracal caracal". Wild Cats of the World. Chicago: University of Chicago Press. pp. 38–43. ISBN 978-0-226-77999-7.
↑ Avgan, B.; Henschel, P.; Ghoddousi, A. (2016). "Caracal caracal". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016.2. International Union for Conservation of Nature.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကဲရကယ်တောကြောင်&oldid=422861" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၁:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။